PoPinVdo – Page3– သတင်းဦး၊သတင်းထူးများ နှင့်​ ဗဟုသုတ
စာသင်​​နေတုန်း မိုးကြိုးပစ်​ချမှုကြောင့် ဆရာမတစ်​ဦးနှင့် ​ကျောင်းသူ ၁၀ဦး၊ ရွာသား အချို့ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိ
October 17, 2018 popin vdoမိုး​လေဝသ သတင်းNo Comment on စာသင်​​နေတုန်း မိုးကြိုးပစ်​ချမှုကြောင့် ဆရာမတစ်​ဦးနှင့် ​ကျောင်းသူ ၁၀ဦး၊ ရွာသား အချို့ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိ
စာသင်​​နေတုန်း မိုးကြိုးပစ်​ချတာ​ကြောင့်​ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိပြီး ဆရာမတစ်​ဦးအပါအဝင်​ ​ကျောင်းသူ ၁၀ဦး၊ရွာသား အချို့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရ တနသာင်္ရီ၊​အောက်​တိုဘာ ၁၆ တနသာင်္ရီတိုင်း သရက်ချောင်းမြို့နယ် ထဲက စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာ စာသင်​​နေတုန်းမိုးကြိုးပစ်​ချတာ​ကြောင့်​ မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိပြီး ဆရာမတစ်​ဦးအပါအဝင်​ ​ကျောင်းသူ ၁၀ဦးနဲ့ ရွာသားသုံးဦးထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရရှိသွားတယ်လို့…
စာမေးပွဲလေးဖြေဖို့ သမီးစာကျက်နေတယ် မေမေ…စာအံနေရင်း ဘယ်အရာကလဲမသိတဲ့ အပိုင်းစတစ်ခုက
October 16, 2018 Funny Popinဖြစ်ရပ်မှန်No Comment on စာမေးပွဲလေးဖြေဖို့ သမီးစာကျက်နေတယ် မေမေ…စာအံနေရင်း ဘယ်အရာကလဲမသိတဲ့ အပိုင်းစတစ်ခုက
စာမေး ပွဲလေးဖြေဖို့ အမှတ်တွေ တိုး ဖို့ သမီးစာကျက်နေတယ် မေမေ…စာအံနေရင်း ဘယ်အရာကလဲမသိ ဘယ်နေရာကလာလဲမသိတဲ့ အပိုင်းစတစ်ခုက ဟိုးးးးအပေါ်ကနေ သမီးဆီကို လွှင့်စင်လာပီး သမီးလေ ကျက်ထားတဲ့စာတွေရော မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပါ အကုန်မေ့ပီး အမှောင်ကြီးပဲမြင်ရတော့တယ်…. မေမေ သမီးရောက်နေတာ…
October 16, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on ဆေးရုံကပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ အဆုတ်တီဘီ သမားတစ်ယောက်တောမှာ အလေ့ကျ ပေါက်တဲ့ ဒီအပင်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိ
ဆေးရုံ က ပြန်လွှတ်လိုက် တဲ့ အဆုတ် တီဘီ သမားတစ်ယောက် တောမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့အပင်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး အသက်ရှည်ရှည် နေသွားရတဲ့ အကြောင်း ဖေါက်သည်ချပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားမှာ ကိုကံမြင့် ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ပုံက အရိုးပေါ်အရေတင်။ချောင်းတစ်ဟွတ်ဟွတ်နဲ့…
အသဲကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပျောက်ကင်းသွားစေခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း
October 16, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on အသဲကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပျောက်ကင်းသွားစေခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း
အရက် ​အရမ်း​သောက်​ခဲ့ တဲ့ ညီတစ်​ယောက်​ အ ခု​တော့ အသဲမှာ အနာဖြစ်​လို့ ​ဆေးရုံခဏခဏ တက်​​နေရပြီ။​ ဆေးရုံတက်​ ​ဆေး စစ်​လိုက်​​တော့ အသဲကင်​ဆာတဲ့။ အသဲကင်​ဆာဖြစ်​​နေတဲ့ ညီ အတွက်​ သူမိသားစု တစ်ခုလုံးက စိတ်​မချမ်းမသာ…
October 16, 2018 Funny Popinဆယ်​လီNo Comment on အနုပညာလောကမှာ လေးစားအားကျရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အိုင်ဒေါကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
သက်မွန်မြင့် ကတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ် သူ နေတိုးရဲ့ အကြောင်းတွေကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ ညီတစ်ယောက်လုံး ဆုံးရှုံး လိုက် ရတဲ့ နေတိုး က အမေဖြစ်သူအတွက် ရပ်တည်ပေးနေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အပေါ်မှာလည်း…
ချစ်သူလေးနဲ့ အပြိုင်ဂေါ်နေတဲ့ ရွှေထူးရဲ့ အထာကျကျ Selfie ပုံရိပ်တွေ
October 16, 2018 Funny Popinဆယ်​လီNo Comment on ချစ်သူလေးနဲ့ အပြိုင်ဂေါ်နေတဲ့ ရွှေထူးရဲ့ အထာကျကျ Selfie ပုံရိပ်တွေ
တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အရမ်းကိုချစ်ကြ တဲ့ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုန်ရတီတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုရော ဝေဖန်မှုတွေကိုပါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လက်ခံပြီး ရှေ့ဆက်နေကြတဲ့ စုံတွဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို Ro လွန်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှပေးလေ့ရှိတဲ့ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်တစားနဲ့…
October 16, 2018 Funny PopinကြားရသိရသမျှNo Comment on မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ပတ္တမြားငမောက် ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ ?
၁၈၈၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့တွင် မင်းမိဖုရား မယ်တော်အားလုံးတို့ အင်္ဂလိပ်တို့ခေါ်ဆောင်ရာသို့ မလွဲမသွေလိုက်ပါရတော့မည်ဟု သိသောကြောင့် အားလုံးပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းနေကြသည်။ ပစ္စည်းဘဏ္ဍာအစုစုမှာ နန်းစဉ်ရတနာများမှအစ ဟင်းယင် ၊ လင်ပန်း ၊ ကွန်းအစ် ၊ ထွေးခံများအထိ ရွှေသားအတိပြီးသော…
October 16, 2018 Funny PopinကြားရသိရသမျှNo Comment on Ejection Seat ( အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ)ဆုိုတာ ဘာလဲ … ?
Ejection Seat ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် Pilot (လေယာဉ်မှူး)အသက်ကယ်ထိုင်ခုံပါ… အသက်ကယ်ထိုင်ခုံ အမျိုးမျိုးကို ခေတ်မှီတိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်… ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များတွင်မူ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း မရှိပေ… အသက်ကယ်ထိုင်ခုံကို လေယာဉ် မြေပြင်နှင့်လေထဲတွင်ဖြစ်စေ မီးလောင်နေလျှင်သော်၎င်း၊ စက်ချို့ယွင်းသွားသော်၎င်း၊…
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားလာနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က လူကူးခုံးတံတားများ
October 16, 2018 Funny PopinကြားရသိရသမျှNo Comment on နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားလာနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က လူကူးခုံးတံတားများ
ဆူးလေဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက် မုခ်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ လူ ကူးခုံးတံတားပေါ်မှာ လူသုံးယောက်အရက်ပုလင်းတွေထောင်ထားပြီးတံတား လက်ရန်းမှီကာ အုပ်စုဖွဲ့ထိုင်နေကြပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲက ကွမ်းတံတွေးကိုတံတားပေါ်ကို ပျစ်ခနဲထွေးထုတ်လိုက်ပြီး တံတားပေါ်မှာ ဖြတ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အကြည့်နဲ့တစ်မျိုး၊ အပြောနဲ့တစ်မျိုစော်ကား မော်ကားပြုမူပါတော့တယ်။ သုံးယောက်လောက် ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်နေလိုက်ကြတာ…
ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ တွဲဘက်စာရင်းစစ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူထိန်းသိမ်း
October 16, 2018 Funny Popinပြည်​တွင်းသတင်းNo Comment on ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ တွဲဘက်စာရင်းစစ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူထိန်းသိမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ တွဲဘက်စာရင်းစစ်ကို ဒီကနေ့ မှာပဲ စစစ က တရားလိုလုပ်အမှုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းအရေးယူလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ သူဟာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့အတွက် ရန်ကုန် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ စစစ က အဲဒီဥပဒေပုဒ်မ…